စာ​မေး​ပွဲ​အောင်သော်​လည်း ကျ​သည်​ဟု ကျောင်း​မှ မှားယွင်း​ပြော​ကြား​သ​ဖြင့် ကိုယ့်ကို​ကိုယ်​သတ်​သေ | J-Myanmar
We love Myanmar
Facebook မှ ဇူကာဘတ် ပိုင်ဆိုင်သော ရှယ်ယာ၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း လှူဒါန်းမည်
phyo, Dec 6, 2015
ရ​သေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်သော ဘုရားရှိခိုး
phyo, Aug 16, 2015
Die Hard Mission in Myanmar
phyo, Apr 24, 2015
ဒုတိယ​ကမ္ဘာ​စစ်​အပြီး နှစ်​ပေါင်း​၇​၀ အကြာ
phyo, Mar 26, 2015
phyo, Mar 17, 2015
အမျိုးသမီး​ပွဲ​တော် ရန်ကုန်​တွင် ပထမ​ဆုံး​အကြိမ်​ကျင်းပ​မည်
phyo, Feb 26, 2015
Zayn Malik နဲ့​ပတ်သက်​တဲ့ အတွေး​အခေါ်​တွေ​ကို ဝေမျှ​ပြော​ကြား​ခဲ့​တဲ့ ဗြိ​တိန် ရူပဗေဒ ပညာ​ရှင် Stephan Hawking
phyo, Apr 28, 2015
သူစိမ်း အမျိုးသား အယောက် ၁​၀​၀ ကို အတူ​ချစ်​တင်း​နှီးနှော​ဖို့​အတွက် လိုက်လံ မေးမြန်း​ခဲ့​တဲ့ အမျိုးသမီး
ကော့​ကော့ ကျော့⁠ကျော့​လေး​လို့ လူ​တွေ​ထင်​ကြ​တဲ့ အနု​ပညာ​ရှင်​တွေ​ရဲ့ အလုပ်​ဟာ အရမ်း​ပင်ပန်း​ပါ​တယ်​လို့ ဆို​လာ​တဲ့ ရွှေမှုန်​ရ​တီ
phyo, Apr 17, 2015
phyo, Apr 3, 2015
ဂျပန်​သို့ Training Visa ဖြင့်​လာ​ရောက်​ရန်​ကြိုးစား​နေ​သူ​များ​အတွက်
phyo, Mar 31, 2015
How I learnedaLanguage in 90 days
phyo, Mar 18, 2015
Miss Asia Pacific World Supertalent 2014
phyo, Jun 5, 2014
WhataWonderful World by Playing For Change
phyo, Jun 4, 2014
phyo, May 29, 2014
phyo, Mar 23, 2015
မွှေးကြိုင်​လန်း​ဆန်း​လို​လျှင် စိတ်​အမှိုက်​တွေ​ကို သန့်ရှင်း​ပါ
phyo, Feb 25, 2015
ရှေး​ဟောင်း​ဘုရား ​၃​၀​၁ ဆူ
phyo, Feb 20, 2015
Computer Network Engineering ပညာဖြန်.ဝေပေးသူကိုစိုင်းလင်းသူနှင်.စကားလက်ဆုံ
phyo, Aug 2, 2015
လူ​မှု​ကွန်ရက်​မှာ နာမည်ကြီး​နေ​တဲ့ ကလေး​ငယ်​နှစ်​ဦး​ဓာတ်​ပုံ​ရဲ့​မူလ​ဇာတ်​ကြောင်း
phyo, May 8, 2015
သင်​မ​သိ​သေး​တဲ့ Titanic သင်္ဘော​အကြောင်း
စာ​မေး​ပွဲ​အောင်သော်​လည်း ကျ​သည်​ဟု ကျောင်း​မှ မှားယွင်း​ပြော​ကြား​သ​ဖြင့် ကိုယ့်ကို​ကိုယ်​သတ်​သေ
phyo — Dec 12, 2014
ကျောင်း​သူ​ပင်​ကီ​ချို​ဟန်​ဟာ မနက်​စာ​စား​ပြီး​သိပ်​မ​ကြာ​တက္ကသိုလ်​ကျောင်း ဝင်​ထဲ ရောက်လာ​ပါ​တယ်။ ကျောင်း​ဝင်း​ထဲ​မှာ သူ့​ခန္ဓာ​ကိုယ်ပေါ် ဓာတ်​ဆီ​တွေ ရွှဲ​နေ​အောင်​လောင်း​ချ​လိုက်​ပြီး မီးခြစ်​ကို ခြစ်​လိုက်​ပါ​တယ်။
မီး​တွေ​လောင်​နေ​တဲ့ ဒီ ၁​၉ နှစ်​သမီး​ဟာ ကျောင်း​ဝင်း​ထဲ အော်ဟစ်​ပြေး​လွား​နေ​ပြီး ကျောင်း​အုပ်​ရဲ့​ရုံး​ခန်း​ရှေ့​မှာ ဒူး​ထောက်​ပုံ​ကျ သွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ရက်​အနည်းငယ် ကြာ​အပြီး​မှာ​တော့ သူမ​ဟာ သေ​ဆုံး​သွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။
အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ Gurgaon မြို့​ရဲ့ တက္ကသိုလ်​ကျောင်း​ဝင်း​ထဲ​မှာ ဖြစ်ပွား​ခဲ့​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
သူ့​ညီမ​ဟာ လွန်​ခဲ့​တဲ့​တစ်​လ​က စာ​မေး​ပွဲ​ရ​မှတ်​နဲ့​ပက်​သက်​ပြီး စိတ်​ဖိစီး​မှု​တွေ​ဖြစ်​ကာ ဒီ​လို​လုပ်​ခဲ့​တာ​လို့ ဆို​ပါ​တယ်။ သူမ​ရဲ့​အဖြေ​လွှာ​ကို အမှတ်​ပြန်လည်​ခြစ်​ပေး​ဖို့ ဆရာ​တွေ​ကို တောင်း​ဆို​နေ​ခဲ့​တာ​လို့ ဆို​ပါ​တယ်။
သူမ​ရဲ့​အဖြေ​လွှာ​ဟာ ရ​မှတ်​သုည​သာ ရ​ခဲ့​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ပင်​ကီ​ချို​ဟန်​ရဲ့​ပြဿနာ​က အမှတ်​သက်သက်​တင် မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ သူမ​ဟာ ရည်​မှန်း​ချက်​မြင့်​မား​သူ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညာသင်​မဲ့​အစား အခြား​ဆွေ​မျိုး​ထဲ​က မိန်း​ကလေး​တွေ​လို အိမ်ထောင်​ပြု​ဖို့​သာ သူမ​ရဲ့​အိမ်​က ဖိ​အားပေး​နေ​ခဲ့​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
“သူ့​မှာ တခြား​လုပ်​စရာ​ဘာ​မှ​မ​ရှိ​တော့​ဘူး။ သူ​ကိုယ်တိုင် သူ့​ကိုယ်​သူ ဖိ​အား​တွေ​တ​အားပေး​နေ​တာ”လို့ အစ်ကို​ဖြစ်​သူ အရမ်​က ပြော​ကြား​ခဲ့​ပါ​တယ်။တကယ်​တော့ အဖြေ​လွှာ​ရလဒ်​ဟာ မှားယွင်း​မှု​သာ​ဖြစ်​ပြီး သူမ​ဟာ စာ​မေး​ပွဲ​အောင်​ခဲ့​ကြောင်း ကျောင်း​က နောက်​ပိုင်း​ကျ​မှ ထုတ်​ပြန်​ခဲ့​တယ်​လို့ Reuter ကဖော်​ပြ​ခဲ့​ပါ​တယ်။
WHO ရဲ့ဖော်​ပြ​ချက်​အရ အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ​ဟာ ၁​၅ နှစ်​မှ ၂​၉ နှစ်​အရွယ်​လူ​ငယ်​များ ကိုယ့်ကို​ကိုယ်​သတ်​သေ​မှု အမြင့်​မား​ဆုံး နိုင်ငံ​လို့​ဆို​ပါ​တယ်။
Credit to Phothutaw
Next post ဗုဒ္ဓ​ရုပ်​ပွားတော်​ကို နား​ကြပ်​တပ်ကြော်​ငြာ​သော ဘား​ဆိုင်​မှ တာဝန်ရှိ​သူ​သုံး​ဦး​ကို အာမခံ​မ​ပေး
Previous post ဂုဏ်​သိက္ခာ
About the Author phyo
ကမ္ဘာကျော် လက်​ဝှေ့​သမား မန်​နီ​ပတ်​ကီ​အောင်း
Are you bot? *
44 − 35 =
အိမ္ရွင္က​ရိုက္နွက္သျ​ဖ​င့​္ အိ​မ​္ေ​ဖာ​္​တ​ဦး ဒဏ္ရာမ်ား​ျ​ဖ​င့​္ ထြ​က​္ေျ​ပး​လာ
7Day Daily 7Day News change DVB japan jMyanmar music myanmar Myanmar artist Popular Myanmar The Voice tourist attraction Trend Myanmar yoeyarlay
Copyright ©2014 Doremi Business Group . All rights reserved.